शिक्षकको मर्का कसले बुझ्ने ? - Online Majdoor
शिक्षा मन्त्रालयले हाललाई कुनै हालतमा स्कूल, कलेज सञ्चालन नगर्न सूचना जारी गरेको छ । वैकल्पिक विधिको सिकाइमा सहभागी गराउन विद्यालयले यही असोज १५ गतेभित्र अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने सूचना पनि शिक्षा मन्त्रालयले जारी ग¥यो । अभिभावकसँग सम्पर्क गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न र निजी विद्यालयलाई न्यूनतम शुल्क लिनसक्ने बाटो पनि सरकारले खोल्यो । सरकारले अस्पष्ट, अन्योलपूर्ण सूचना जारी गर्नुहुँदैन । भर्ना लिने, पठनपाठनको ठेगान नगर्ने, न्यूनतम शुल्क भनेर निश्चित रकम नतोक्ने सरकारी नीतिले शिक्षक, विद्यार्थीमात्र होइन अभिभावकहरू पनि अन्योल छन् ।
विद्यालय, कलेज कहिले खुल्ने हो, निश्चित छैन । भच्र्युअल कक्षा वैकल्पिक कक्षा त हो तर त्यो सबैको पहुँचमा पुग्दैन, पुगेको छैन । सबैले पढ्न नपाउने त्यो पढाइलाई सफल मान्ने कि नमान्ने ¤ पढ्न नभ्याएका, पढ्न नसकेका विद्यार्थीहरूको लागि अर्को के उपाय छ ? अनिर्णित र अनिश्चित छ । के उनीहरूको परीक्षा लिनुपर्दैन ? के उनीहरूलाई कक्षा चढाउनु पर्दैन ? सरकारी नीतिकै कारण विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरू दोधारमा छन् ।
सरकारले पढाइको समाप्ति विगतमा झैँ चैतमसान्त तोक्यो । सयौँ हजारौँ विद्यालयमा अहिलेसम्म कक्षा सञ्चालन भएको छैन । कति विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे । कतिले विद्यालयमै कक्षा सञ्चालन गर्नथाले । सामाजिक दुरीको आधारमा एकै पटक आमन्त्रण नगरिकन पालैपालो कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको खबर पनि प्रकाशमा आएको छ । स्कूल नखोलेर, सञ्चालन नभएर रोजगार नपाएका, रोजगार गुमेका शिक्षकहरू समस्यामा परेका छन् । जीवनको जोहो गर्न कठिनाइ भएका छन् । उनीहरू पहिलेको सेवा पाउने आशामा बस्ने कि अर्कै बाटो रोज्ने भनी दोधारमा परेका छन् । शिक्षकहरूको दैनिकी नचलेर कति शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । आन्दोलनमा उत्रनु स्वाभाविक हो । आर्थिक स्रोत भएको, जुटेको विद्यालयले त पारिश्रमिक देला । तर, कति कहिलेसम्म दिइरहने ¤ दिन कहाँबाट पाउने ? सबै विद्यालयमा आम्दानीको स्रोत हुन्छ भन्ने होइन । वर्षको आम्दानी सोही वर्ष खर्च हुने र खर्च भएका विद्यालय पनि छन् । त्यस्तो विद्यालयमा के विद्यालय सञ्चालकहरूको घर, खेत, गहना बेचेर तलब खुवाउने ? के त्यो सम्भव छ ?
विद्यार्थीसँग शुल्क नउठाइकन न भवनको बहाल तिर्नसक्छ न त शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन सकिन्छ । कति विद्यालयले भच्र्युअल कक्षा सञ्चालनसँगै थोर बहुत शुल्क उठाए । कतिले अहिलेसम्म उठाएका छैनन् । यतिबेला अभिभावकहरू मौन छन् । अभिभावकहरूले पनि कक्षा सञ्चालनको आधारमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिनसक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । कक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ, कक्षा सञ्चालनबापतको शुल्क पनि दिनुपर्छ । इसानले पनि शुल्क दिने वातावरण तयार गर्न अभिभावकहरूसँग आग्रह गरेको छ । शिक्षकलाई भौकै राख्न पनि मिलेन । काम गरेबापतको पारिश्रमिक त थोरै धेरै दिनुपर्छ । काम गर्दाको परिश्रमिक या ज्याला दिनु अन्यथा होइन । यसबारे स्थानीय निकाय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकहरूले पनि मनन गर्नुपर्ने विषय छ ।
सरकार दीर्घकालीन असरबारे मतलब राख्दैन
मानव अङ्ग कुनै फलफूल होइन